လင်္ကာ: ကချင် စစ်ပွဲ ကိစ္စ....(ကိုထိုက်)
ကချင် စစ်ပွဲ ကိစ္စ....(ကိုထိုက်)
စစ်ပွဲ ကိစ္စမှာ .... မြေပြင် ကိစ္စ သတင်းအတိအကျ သိဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်တာဆိုတော့ ရမ်းသမ်း မှတ်ချက်ပေးပြီး ဘယ်သူ လွန်တယ် ... ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ မပြောလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် .. အဆုံးစွန်ဘက် ကနေ ကြည့်ရင်တော့ ... ကချင် ပြည်နယ်ထဲမှာ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာမို့ ... ထိုးစစ်ဆိုတာ အစိုးရတပ်ကပဲ လုပ်နေတာလို့ သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ စစ်လာဖြစ်နေရင်တော့ ... ဒါ ကချင် တပ်ရဲ့ ထိုးစစ်ပေါ့။ သာမန် လူတိုင်းက ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။
.. ဒီတော့ စစ်ဗျူဟာကို နားလည်နေတဲ့ အစိုးရတပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး သမားတွေပဲဗျာ ... "စစ်ဆိုတာ ကိုယ်က ရပ်မယ်ဆိုတိုင်း သူတို့က မရပ်ရင် ရပ်လို့မှ မရတာ" ... "သူတို့က လာတိုက်ရင် ကိုယ်က ပြန်ခုခံရမယ်" .. လို့ ခပ်လွယ်လွယ် မှတ်ချက် ပေးတာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ပညာမဲ့လွန်းပါတယ်။
စစ်ပွဲကို ရပ်လို့မရနိုင်ဘူး ... ကချင်တွေက လာတိုက်တာ ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကို အစကတည်းက ထည့်တွေးပြီး ... စစ်ရေး ဗျူဟာဆန်ဆန် ကြေငြာချက် ထုတ်ပါလား။ ... ဘယ်တပ်တွေက ဘယ်မှာ စခန်းချထားတယ်။ ဘယ်နေရာတွေက အစိုးရတပ်တွေရဲ့ စိုးမိုး ဒေသတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို လာတိုက်မယ်ဆိုရင် ပြန်ခုခံရမယ့် ခုခံစစ် ဖြစ်ပြီး
.. လိုအပ်ရင် နောက်ထပ် လာမတိုက်နိုင်အောင် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကို ဘယ်ဒေသအထိ လိုက်လုပ်မယ်။ သို့သော် လာမတိုက်ရင် ... အပစ်ရပ်ထားမှာ ဖြစ်တယ်။ ရှေ့တန်းမှာ ဘယ်တပ်တွေက ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လမ်းကြောင်းက ဆုတ်မယ်။ အဲဒီ
လမ်းကြောင်းမှာ လုံခြုံရေး ယူထားမယ်။ လာတိုက်ရင် .. တိုက်တဲ့သူက အလွန် ဖြစ်တာကြောင့် ... အပစ်ရပ်ရေးမှာ အစိုးရတပ်က တိုက်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိအောင် ကြေငြာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြည့်အဝ အပစ်အခတ် ရပ်ရေးကို ... ကြိုးစားဆောက်ရွက်နေပါတယ် ဆိုတာမျိုး ... အတိအကျ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလား။ ဒါတွေကို ကချင်ဘက်က လိုက်တိုက်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရင် ... အစိုးရ စစ်တပ်က ပြန်တိုက်ရရင် .. ဘယ်သူ လွန်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ်။ အခုကတော့ ရပ်မယ် ပြောပြီး နေ့တိုင်း စစ်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတော့ ... ရပ်ဖို့ ပြောတဲ့ ... သမ္မတလည်း ငပေါကြီးဖြစ်၊ လွှတ်တော်လည်း ငပေါတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးဖြစ် .. အစိုးရ သတင်းကြေငြာချက်ဆိုတာလည်း ပြောသမျှကို ယုံစရာဆိုတာ အရင်ကလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ အခုလည်း မယုံရဘူး ... စတဲ့ အယုံအကြည့်မဲ့မှုက ပြည်သူတွေကြားမှာ တနေ့ ပိုကြီးလာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလောက် မခက်ပါဘူးဗျာ။ ငြိမ်းချမ်းချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အခု စစ်ဆက်ဖြစ်နေတာကတော့ ... ငြိမ်းချမ်းချင်တဲ့ ဆန္ဒဟာ ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတာ ထင်းရှားနေတယ်။ (ကိုထိုက်)
links ( 21 January 2013 )
links ( 21 January 2013 ) English
မထိရှခဲ့သမျှ ယက်ရှယ်မိတဲ့အဆင်များ - အဂ္ဂ လင်း
UNFC အတွင်းရေးမှူး ၂ ဦးခွန်ဥက္ကာအင်တာဗျူး
War continues in kachinstate - BBC Burmese News ...
ပညာရေးသည် နိုင်ငံရေးဖြစ်သည် (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
ပြန်ကြားရေး ဒု-၀န်ကြီးနဲ့ အင်တာဗျူး
links ( 20 January 2013 )
ယမ်းငွေ့ဝေဆဲ ကချင်မြေ (၃)
21st January (10:00 am) Exchange Rate
InaYouTube video, six dancers can be seen performing the provocative move along to music while stood in front of the Malaya Zemlya monument in Novorossiy...
Nepal earthquake: Recap updates as desperate search for survivors continues
Up to 70 Brits are thought to be missing after yesterday's huge quake killed more than 2,200 people
Nepal quake: 2,500 dead, people shell-shocked
The cawing of crows mixed with terrified screams as the worst of the aftershocks — magnitude 6.7 — pummeled the capital city.
When the earthquake hit, many of Nepal's most renowned pagodas in and around Kathmandu crumbled into rubble-covered stumps. Others were smothered under spl...
Prince Fahad Al Saud hopesanew generation of games will end negative portrayals of Arab communities.
နီပေါမှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြင်းအားကြီး ငလျင် ထပ်လှုပ်
ငလျင်ဒဏ် ထိထားတဲ့ အိမ်တွေထဲ ပြန်ဝင်ဖို့ ကြောက်နေကြနီပေါနိုင်ငံမှာ စနေနေ့တုန်းက ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် လူနှစ်ထောင့် သုံးရာကျော် သေဆုံးခဲ့ရအပြီး တရက်အကြာ တနဂင်္နွေနေ...
In an appearance on CNN’s “Reliable Sources" with Brian Stelter on Sunday morning, Washington Post Executive Editor Martin Baron said the paper is doing ev...
CASH ADVANCE? Author: Time to probe mix of public, private Clinton $$
[image: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo: wikipedia]
တောင်ကြီးမြို့မှာ ယူနီဖေါင်းအင်္ကျီတွေဝတ်ဆင်ပြီး နံပါတ်တုတ်တွေကိုင်ဆောင်ထားတ...
တောင်ကြီးမြို့မှာ ယူနီဖေါင်းအင်္ကျီတွေဝတ်ဆင်ပြီး နံပါတ်တုတ်တွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး ရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတ...